Maraykanka oo dalab degdeg hordhigay Farmaajo +Waqtiga doorashada - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Maraykanka oo dalab degdeg hordhigay Farmaajo +Waqtiga doorashada
Maraykanka oo dalab degdeg hordhigay Farmaajo +Waqtiga doorashada
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadashay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo khilaafka ka taagan qabsoomida doorashada dalka ka dhaceysa oo lagu heshiin waayay, xilli uu dhammaaday muddo xileedka Madaxweyne Farmaajo.
Warbixin qoraal ah oo kasoo baxay Safaaradda Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in muhiim ay tahay in buuxa looga gaaro khilaafka hareeyay qabsoomida doorashada, isla markaana khilaafka soo jiitamayay uu sababay in wax horumar ah laga gaari waayo la-dagaalanka Al-shabaab.
Mareykanka ayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee waqtigiisu dhammaaday si deg deg ah uga dalbaday inuu hsehiis uga keeno Madaxda dowlad Goboleedya, ayna xal ka gaaraan is marin waaga taagan.
Sidoo kale Mareykanka ayaa tilmaamay in xal ka gaarista khilaafka uu muhiim u yahay Mustaqbal Soomaaliya, waxaana Madaxda la faray inay dhinac iska dhigaan dahanooda Gaarka oo ay xaliyaan khilaafka taagan, si loo qabto doorasho heshiis lagu yahay.
Ugu dambeyn Safaaradda Mareykanka ayaa sheegtay in arrimo badan oo muhiim ah horumar laga gaari lahaa sida xoojinta amniga dalka, horumarinta dhaqaalaha, Wejiga koowaad ee deynta Cafinta Soomaaliya iyo raashin la’aan heysata dad shacab ah.
Si kastaba Qoraalka kasoo baxay Safaaradda Mareykanka ayaa waxaa uu ku soo beegmaday, iyadoo Madaxweyne Farmaajo muddo xileedkiisa uu dhammaaday, xili heshiis laga gaari waayay doorashada dalka.